အပျင်းကြီးသော မိန်းကလေးတို့ အတွက် ဗိုက်သားချပ်ရပ်စေမည့် အလွယ်နည်းများ ..! - APANNPYAY
Home / ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ / အလှအပရေးရာ / အပျင်းကြီးသော မိန်းကလေးတို့ အတွက် ဗိုက်သားချပ်ရပ်စေမည့် အလွယ်နည်းများ ..!
အပျင်းကြီးသော မိန်းကလေးတို့ အတွက် ဗိုက်သားချပ်ရပ်စေမည့် အလွယ်နည်းများ ..!
Apann Pyay 7:45 AM ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ , အလှအပရေးရာ Edit
ကိုယ်အလေးချိန်ကို မြန်မြန် လျော့ကျလိုရင် အဆီအအိမ့်များတဲ့ အစာတွေ ကို ရှောင်ပါ။ သကြားများတဲ့ အစာနဲ့ အယ်လ်ကိုဟောကို ရှောင်ပါ။ အစာတွေကို တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ များများစားရင် လေပွတာနဲ့ ဗိုက်ပူတာ တို့ ကို ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် တစ်နေ့ အစာနည်းနည်းနဲ့ ၃-၄ ကြိမ်ခန့် စားပေး သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗိုက်သားချပ်ရပ်စေဖို့ အောက်ပါ အလွယ်နည်းတွေ ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
(၁) ကောက်နှံတစ်ခုလုံး အစာနှင့် ပရိုတင်းပါသော အစာကို ပိုစားပါ
ကောက်နှံတစ်ခုလုံးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့အစာကို ကြိတ်ဝါးစား
သောက်တာက ဗိုက်အဆီကို လျော့ကျစေပြီး ဗိုက်သားချပ် ရပ် လှပစေပါတယ်။ ကောက်နှံတစ်ခုလုံးစာကို စားသူတွေက အခွံချွတ်ထားတဲ့ ကောက်နှံစာကို စားသူတွေထက် ဗိုက်အဆီ
လျော့ကျမှု နှစ်ဆကျော် ပိုများစေပါတယ်။ အခွံချွတ် မထားတဲ့
ကောက်နှံစာဟာ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း ထွက်နှုန်းကို လျော့ ကျစေပြီး ၀မ်းဗိုက်အဆီကို ခပ်လွယ်လွယ် လျှော့ချနိုင် တာကြောင့်ပါ။
(၂) သရေစာအတွက် ဖရဲသီးစားပါ
ဖရဲသီးမှာပါတဲ့ အမိုင်နိုင်အက်စစ် အာဂျီနင်းဟာ ကိုယ်အလေး ချိန်ကို လျော့ကျစေတယ်လို့ အာဟာရဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာမှု အသစ်တစ်ခုအရသိရပါတယ်။ အာဂျီနင်းပါတဲ့ အစာကို သုံးလ ကြာ စားတဲ့အ၀လွန်တဲ့ ကြွက်တွေကို လေ့လာမှုအရ အဆီ
လျော့ကျနှုန်း ၆၄ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါတယ်။
(၃) အမြှုပ်ထသော အရည်ကို ရှောင်ပါ
ကာဗွန်ပါတဲ့ ဖျော်ရည်တွေက ၀မ်းဗိုက်သားကို ဖောင်းတင်း မှုဖြစ်စေပြီး လေပွစေ တာကြောင့် ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အမြှုပ်တဲ့ အရည်အစား ရိုးရိုးရေကိုပဲ သောက်သင့်ပါတယ်။
(၄) အစာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ကြေညက်စွာ ၀ါးစားပါ
စိတ်ဖိစီးမှုရှိရင် အစာကို အလောတကြီး စားဖြစ်ကြပါတယ်။ အစာပမာဏများများစားလေ၊ ဗိုက်အဆီများလေ ဖြစ်တယ် လို့ လေ့လာမှုတွေက ဆိုထားတာကြောင့် အစာကို အလော တကြီး မစားပါနဲ့။
(၅) ဗိုက်သားချပ်ရပ်စေမည့် ၀တ်စုံ ၀တ်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်ပြီး ချပ်ရပ်လှပစေတဲ့ ၀တ်စုံမျိုးကို ရွေးချယ် ၀တ်ပါ။ ချည်သား၊ ပိုးသားတို့လို ပေါ့ပါးတဲ့ ၀တ်စုံကို လည်တံနဲ့ ခါးအလှနဲ့ ၀မ်းဗိုက်တစ်ဝိုက်မှာ အနက်ရောင်လို အရောင်ရင့်တာကို ရွေးဝတ်ပါ။
(၆) ရှလကာရည် ထည့်ပါ
ဟင်းရွက်သုပ်တွေ၊ အသားဟင်းတွေထဲမှာ ရှလကာရည် ထည့်ပြီးစားတာက ၀မ်းဗိုက်အဆီတွေကို လျော့ကျစေပြီး ခါးအတိုင်းအတာကို သွယ်လျလှပစေပါတယ်။ ရှလကာ ရည်ထဲက အဆီတစ်အက်စစ်ဟာ အဆီချေဖျက်နိုင်တဲ့ မျိုးဗီဇကို အားပေးကြောင်း လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
မတ်မတ်ရပ်တာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ငါးပေါင်လောက် လျော့သွား သလိုထင်ရစေပါတယ်။ ခါးကို မတ်မတ်နေတာက ၀မ်းဗိုက်နဲ့ ခါးကြွက် သားတွေကို သန်စွမ်းကျစ်လျစ်သွားစေပါတယ်။
ကိုယျအလေးခြိနျကို မွနျမွနျ လြော့ကလြိုရငျ အဆီအအိမျ့မြားတဲ့ အစာတှေ ကို ရှောငျပါ။ သကွားမြားတဲ့ အစာနဲ့ အယျလျကိုဟောကို ရှောငျပါ။ အစာတှကေို တဈကွိမျတညျးနဲ့ မြားမြားစားရငျ လပှေတာနဲ့ ဗိုကျပူတာ တို့ ကို ဖွဈစနေိုငျတာကွောငျ့ တဈနေ့ အစာနညျးနညျးနဲ့ ၃-၄ ကွိမျခနျ့ စားပေး သငျ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဗိုကျသားခပျြရပျစဖေို့ အောကျပါ အလှယျနညျးတှေ ကို လုပျဆောငျပေးပါ။=
(၁) ကောကျနှံတဈခုလုံး အစာနှငျ့ ပရိုတငျးပါသော
ကောကျနှံတဈခုလုံးနဲ့ လုပျထားတဲ့အစာကို ကွိတျဝါးစား
သောကျတာက ဗိုကျအဆီကို လြော့ကစြပွေီး ဗိုကျသားခပျြ ရပျ လှပစပေါတယျ။ ကောကျနှံတဈခုလုံးစာကို စားသူတှကေ အခှံခြှတျထားတဲ့ ကောကျနှံစာကို စားသူတှထေကျ ဗိုကျအဆီ
လြော့ကမြှု နှဈဆကြျော ပိုမြားစပေါတယျ။ အခှံခြှတျ မထားတဲ့
ကောကျနှံစာဟာ အငျဆူလငျဟျောမုနျး ထှကျနှုနျးကို လြော့ ကစြပွေီး ဝမျးဗိုကျအဆီကို ခပျလှယျလှယျ လြှော့ခနြိုငျ တာကွောငျ့ပါ။
(၂) သရစောအတှကျ ဖရဲသီးစားပါ
ဖရဲသီးမှာပါတဲ့ အမိုငျနိုငျအကျစဈ အာဂြီနငျးဟာ ကိုယျအလေး ခြိနျကို လြော့ကစြတေယျလို့ အာဟာရဂြာနယျရဲ့ လလေ့ာမှု အသဈတဈခုအရသိရပါတယျ။ အာဂြီနငျးပါတဲ့ အစာကို သုံးလ ကွာ စားတဲ့အဝလှနျတဲ့ ကွှကျတှကေို လလေ့ာမှုအရ အဆီ
လြော့ကနြှုနျး ၆၄ ရာခိုငျနှုနျး လြော့နညျးကွောငျး တှရှေိ့ရ ပါတယျ။
(၃) အမွှုပျထသော အရညျကို ရှောငျပါ
ကာဗှနျပါတဲ့ ဖြျောရညျတှကေ ဝမျးဗိုကျသားကို ဖောငျးတငျး မှုဖွဈစပွေီး လပှေစေ တာကွောငျ့ ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ အမွှုပျတဲ့ အရညျအစား ရိုးရိုးရကေိုပဲ သောကျသငျ့ပါတယျ။
(၄) အစာကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ကွညေကျစှာ ဝါးစားပါ
စိတျဖိစီးမှုရှိရငျ အစာကို အလောတကွီး စားဖွဈကွပါတယျ။ အစာပမာဏမြားမြားစားလေ၊ ဗိုကျအဆီမြားလေ ဖွဈတယျ လို့ လလေ့ာမှုတှကေ ဆိုထားတာကွောငျ့ အစာကို အလော တကွီး မစားပါနဲ့။
(၅) ဗိုကျသားခပျြရပျစမေညျ့ ဝတျစုံ ဝတျပါ
ခန်ဓာကိုယျနဲ့ ကှကျတိဖွဈပွီး ခပျြရပျလှပစတေဲ့ ဝတျစုံမြိုးကို ရှေးခယျြ ဝတျပါ။ ခညျြသား၊ ပိုးသားတို့လို ပေါ့ပါးတဲ့ ဝတျစုံကို လညျတံနဲ့ ခါးအလှနဲ့ ဝမျးဗိုကျတဈဝိုကျမှာ အနကျရောငျလို အရောငျရငျ့တာကို ရှေးဝတျပါ။
(၆) ရှလကာရညျ ထညျ့ပါ
ဟငျးရှကျသုပျတှေ၊ အသားဟငျးတှထေဲမှာ ရှလကာရညျ ထညျ့ပွီးစားတာက ဝမျးဗိုကျအဆီတှကေို လြော့ကစြပွေီး ခါးအတိုငျးအတာကို သှယျလလြှပစပေါတယျ။ ရှလကာ ရညျထဲက အဆီတဈအကျစဈဟာ အဆီခဖြေကျြနိုငျတဲ့ မြိုးဗီဇကို အားပေးကွောငျး လလေ့ာသူတှကေ ဆိုပါတယျ။
မတျမတျရပျတာကွောငျ့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက ငါးပေါငျလောကျ လြော့သှား သလိုထငျရစပေါတယျ။ ခါးကို မတျမတျနတောက ဝမျးဗိုကျနဲ့ ခါးကွှကျ သားတှကေို သနျစှမျးကဈြလဈြသှားစပေါတယျ။